आज चैत्र ७ गते शुक्रबार, तपाईको दिन कस्तो रहला? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल!
तपाइको दिन मिश्र फलदायी रहेको छ । परिवारसँग बसेर महत्वपूर्ण चर्चा-विचारणा गर्नुहुनेछ । घरको सजावटमा तपाईलाई परिवर्तन गर्ने ईच्छा आउनेछ। अफिस वा व्यवसाय क्षेत्रमा अधिकारीसँग महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा हुनेछ। सरकारी लाभ हुनेछ । कार्यभार बढ्न सक्छ । स्वास्थ्यको मामलामा शारीरिक थकानले अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ ।
नयाँ कार्य गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ । कुनै धार्मिक स्थलको भेटले तपाईको मन भक्तिमय हुनेछ । टाढास्थित प्रेमी वा मित्रको शुभ समाचार मिल्नेछ। व्यापारमा आर्थिक लाभ हुन् सक्ला। स्वास्थ्य मध्यम रहनेछ ।
नयाँ कार्य प्रारम्भ नगर्नुहोला। क्रोधको कारण केहि अनिष्ट नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला । कामवृत्तिमा ध्यान राख्ने कोसिस गर्नुहुनेछ । अधिक खर्च हुनेछ । घर वा अफिसमा बोलिमा ध्यान राख्नुहोला । कुनै कारण समयानुसार खान-पानको व्यवस्था हुनेछैन ।
तपाईको सम्पूर्ण दिन आनन्द तथा मनोरंजनमा बित्नेछ । विपरीत लिंगीय व्यक्तिसँग भेट हुनेछ । आनन्दप्रमोदको साधन ,वस्त्र इत्यादि किन्नुहुनेछ। उत्तम भोजन, सुखको योग तथा प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ । व्यवसायिक क्षेत्रमा लाभदायी दिन रहेको छ ।
तपाईको दिन मिश्र फलदायी रहेको छ । घरमा शान्तिको वातावरण रहनेछ । दैनिक कार्यमा रुकावट आउनेछ । शत्रु तथा प्रतिस्पर्धिको कारण समस्या आउनेछ । उच्च पदाधिकारिसँग विवाद नगर्नुहोला। मानसिक व्याकुलताको अनुभव हुनेछ ।
सन्तानको विषयमा चिन्तित रहनुहुनेछ । मन विचलित रहन सक्ला । पेट सम्बन्धित पीडा हुनेछ । आकस्मिक खर्च होला। कुराकानीमा तार्किक एवं बौद्घिक चर्चाबाट टाढा रहनुहोला ।
मानसिक रूपबाट थकानको अनुभव हुनेछ । तपाई अधिक भावुक रहनु हुनेछ । मनमा उठेको विचारको कारण समस्यामा रहनुहुनेछ । आमा तथा स्त्रीको विषयमा चिन्ता रहनेछ। पानीबाट टाढा रहनुहोला । निन्द्रा अपूर्ण रहनाले मानसिक व्यग्रता रहनेछ ।
पुरै दिन प्रसन्न रहनुहुनेछ । कुनै नयाँ कार्य प्रारम्भ गर्न पाउनुहुनेछ । मित्र वा आफन्तसँग भेट हुनेछ । कुनै पनि काममा सफलता मिल्नेछ। आर्थिक लाभ एवं भाग्यवृद्धिको योग रहेको छ । प्संरेम सम्बन्ध रहनेछ ।
तपाईको दिन मध्यम फलदायी रहेको छ । निरर्थक व्यय हुनेछ । मनमा ग्लानि रहनेछ । परिवारसँग मनमुटाव हुनेछ । दुविधायुक्त मनोदशाको कारण निर्णय लिन सक्नुहुने छैन । कार्यभार बढ्नेछ ।
प्रत्येक कार्य सरलतासँग पूर्ण हुनेछ । कार्यालयमा तथा व्यावसायिक स्थलमा तपाईको प्रतिष्ठा हुनेछ । पदोन्नतिको योग रहेको छ । गृहस्थजीवनमा आनन्द वातावरण रहनेछ । शारीरिक हानि हुने योग रहेको छ । मित्र र प्रेमीसँग भेट हुनेछ ।
स्वास्थ्य प्रति जागरुक रहनुहोला । मानसिक स्वस्थताको कमी रहनेछ । अनुचित स्थानमा लगानी गर्नुहुनेछ । परिवारको सदस्यले विरोधी व्यवहार गर्न सक्ला। क्रोधमा ध्यान राख्नुहोला ।
पारिवारिक तथा सामाजिक कुरामा विशेष लिप्त रहनुहुनेछ । मित्रसँग भेट हुनेछ र खर्च पनि गर्नुहुनेछ । रमणीय स्थानमा यात्रा गर्नुहुनेछ । प्रत्येक क्षेत्रमा लाभ हुनेछ । जीवनसाथीको इच्छुकको लागि जीवनसाथी मिल्नेछ ।
प्रकाशित : बिहिबार, चैत ०६, २०७६१३:३७
आज चैत्र ८ गते शनिबार, तपाईको दिन कस्तो रहला? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल!